Baqattoonni Itoophiyaa 16 Zaambiyaa keessatti too'annaa jala oolan - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Baqattoonni Itoophiyaa 16 Zaambiyaa keessatti too’annaa jala oolan
Baqattoonni Itoophiyaa 16 Zaambiyaa keessatti too’annaa jala oolan
Gulantaan godaansa (immigration department) Zaambiyaa baqattoota Itoophiyaa 16 too’annaa jala oolchuu ibse. Baqattoonni kunniin kan too’annaa jala oolan magaalaa Nakondetti. Baqattoonni kudha jahanuu mana tokko keessatti itti cufameeti kan argaman. Namichi namoota kanniin karaa dabarsuuf bakka tokkotti wolitti qabe jedhame, Jastis Sikaazewee, yeroodhaaf hinargamne.
Baqatoonni itoophiyaa too’annaa poolisii jala oolan kunniin umrii 16 hanga 22 jiddutti kan argamaniidha.
Baqattoota Itoophiyaa yeroo biyyoota Aafrikaa addaddaa keessatti qabaman himannaa seeraan ala daangaa biyyootaa cabsanii seenuu jedhutu irrattii dhihaata. Yeroo heddu hidhaa baatii 6 hanga woggaa 3 tiin adabamu. Keessumattuu manniin hidhaa Tanzaniyaa, Zaambiyaafi Maalaawii keessa hidhamtoonni Itoophiyaa baay’een akka jiraniidha kan yeroo garagaraatti gabafamaa ture.
Baqaattooni Itoophiyaa gara Afrikaa Kibbaa deeman daandii irratti biyyoota akka Tanzaaniyaa, Maalaawii, Zaambiyaafi Mozaambik keessatti du’u, saamamu, hidhamu, dararamu. Kanniin afaan leencaa bu’aniifi busaan dhumanii awwaalcha dhaban danuudha.
daandii irratti qabamuu
imala gara aafrikaa kibbaa
Previous articleNamoonni jimaa Ameerikaa seensisuufi raabsuu irratti bobba’an jedhaman mana murtee New York tti dhihaatan
Next articleFilisxeem miseensa Manamurtii Yakka Idiladdunyaa (ICC) ta’uuf iyyannoo galfatte